Tuesday May 22, 2018 - 13:41:14 in Wararka by Super Admin
Khasaara lixaad leh ayaa ka dhashay weerar naf hurnimo oo maanta duhurkii lagu beegsaday Bar koontarool oo kutaal degmada Afgooye ee Shabeelaha Hoose.
War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa lagu sheegayin camaliyad istish-haadi ah lala beegsaday kolonyo ciidamo Bangaraaf ah xilli ay marayeen Koontaroolka Baar Ismaaciil.
Gaari walxaha qarxa lagasoo buuxiyay oo uu kaxaynayay dagaalyahan Naftiis hure ah ayaa gaarigiisa ku dhuftay Baabuur Cabdi Bile ah oo ay lasocdeen askar iyo saraakiil ah gaar ahaan kuw aloo yaqaan Bangaraaf ee Mareykanku ku adeegto.
Al Shabaab waxay si hordhac ah u sheegtay in dhimashadu ay gaarayso illaa 12 askari iyo burbur gaaray gaari Tiknika ah oo ay wateen ciidamada Bangaraafta oo ay Tababartay dowladda Mareykanka kuna lug lahaaday dhowr xasuuq oo dad shacab ah loogu geystay gobollada Shabeelaha Hoose iyo Shabeelaha dhexe.
Goob Joogayaal ayaa sheegay in ay maqleen jugta qarax weyn kadibna ay arkeen gaari Cabdi Bile ah oo gubanaya waxayna waxyeello gaartay gaari kale oo qeyb ka ahaa kolonyada labeegsaday, ciidamada weerarka istish-haadiga ah lala beegsaday ayaa ka yimid saldhigga Balidoogle waxayna kusii jeedeen dhanka magaalada Muqdisho.
Waa Weerarkii Naf hurnimo ee ugu horreeya oo ka dhaca Soomaaliya tan iyo bilasha Bisha Barakeysan ee Ramadaan oo ah bil Al Shabaab ay sare uqaado Howlgallada Jihaadiga ah ee ka socda Koonfurta iyo Bartamaha dalka.